व्यालेन्स स्कूलिङको कन्सेप्टमा अघि बढ्न खोज्दैछौं
बनेपा निष्ट कलेज
# आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बनेपा निष्टले माध्यमिक तहको शिक्षा सुरु गरेको छ, यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?
वास्तवमा के हो भने २०६८ सालमा जब हामी निष्ट फाउन्डेसन काभ्रे जिल्लामा केही संस्थाहरुलाई एक्पान्सन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन पञ्चकुमारी उच्च माविलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यतिखेर हाम्रो विद्यालय नर्सरी देखि कक्षा १२ सम्म संचालन भएको थियो । तर हाम्रो एक किसिमको सोच मूलतः साइन्स र म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने भएको हुनाले हामीले ११ र १२ को कक्षालाई मात्र अगाडि बढाउन सक्यौैं । अहिले तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा नियमावलीमा भएको संशोधन, विद्यालय शिक्षा १२ सम्मलाई ग्रहण गरिसकेको अवस्था र माध्यमिक विद्यालय भनेर ९–१२ भनेर मानिसकेको अवस्थामा हामी माध्यमिक भित्रको पनि एउटा पाटो ११ र १२ कक्षा संचालन गरिरहेको अवस्थामा हामीले यो स्कूललाई व्यवहारमा पूर्णता दिने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने हेतुले ९–१२ लाई एकै ठाउँमा राखेर प्राक्टिस पनि गरौं र अहिलेको आवश्यकता र १२ पछि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुलाई ९ कक्षा देखि नै तयारी गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ यो वर्ष हामीले कक्षा ९ मा भर्नाको आव्हान गरेका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको ९–१२ सेकेण्डरी लेभललाई अलि फरक धारबाट साइन्सलाई विशेष फोकस गर्दै, भएका करिकुलमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी संचालन गर्न लागिएको हो । हामी प्रतिस्पर्धाको लागि उत्रने भन्दा पनि आफ्नो पहिचान, आफ्नो समाजले खोजेको र समाजमा आवश्यक भएको कुराहरुमा टेकेर सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ९ कक्षा देखि सुरु गर्न लागेका हौं । अर्काे वर्ष भौतिक पूर्वाधारहरु सम्पन्न भैसकेपछि कक्षा १ देखि ८ सम्म भर्ना लिनेछौं ।
# विज्ञान पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुले कक्षा ९ देखि नै भर्ना गर्दा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?
हामीले बाहिर पूर्णरुपमा साइन्स वेस सेकेण्डरी लेभल (९–१२) भनेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिमा एक किसिमको क्षमता हुन्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमताको आधारमा मात्र होइन, उसको उमेर, परिवेश र क्षमताको आधारमा विद्यालय शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । ६ वर्षको उमेरमा १ कक्षा पुगेपछि १८ वर्षको उमेरमा १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने हो । १२ पछिको शिक्षा भनेको उच्च शिक्षा हो । उसको रुची अनुसारको विषय अध्ययन गर्ने हो । सबैको लागि अनिवार्य पनि होइन । त्यसले गर्दा अबको जुन प्रतिस्पर्धा छ, यो प्रतिस्पर्धामा हाम्रो ९ कक्षा देखि नै त्यो किसिमको सोच दृष्टिकोण राखेका छौं । यदि हामी समाजमा स्थापित हुन चाहन्छौं भने हाम्रो आधारभूत ज्ञान भनेको साइन्स र म्याथमेटिक्समा हुन जरुरी छ । यसले भोलिका शैक्षिक यात्रामा पनि सहज हुन्छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने हामीकहाँ ९ कक्षामा भर्ना भएपछि १२ कक्षा पछि ११ र १२ को साइन्समा जुन सिस्टम छ त्यहि सिस्टमलाई कक्षा ९ देखि नै सुरु गर्ने र त्यसको लेभलअनुसार गर्नेछौं ।
# नेपालको नयाँ शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम अनुसार अभिभावकहरुलाई विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
शिक्षा भनेको पछिका लागि लगानी हो । अर्काेकुरा हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, ११ र १२ मा भएको सुविधाहरुलाई ९ कक्षा देखि नै सुरु गर्ने हो । फ्याकल्टी पनि त्यहि हो, ल्याब, स्थान पनि त्यहि हो । त्यसले गर्दा हामीले जे कुरा गर्छाै भनेर भनेका छौं त्यो हामीले गर्न सक्ने अवस्था अभिभावकहरुले बुझ्नुभएको छ । हामीले अलिकति व्यालेन्स स्कूलिङको कन्सेप्टमा अलि अगाडि बढ्न खोज्दैछौं । यसले गर्दा हाम्रो आफ्नै पहिचान, मूल्य र मान्यता हुनेछ । पछिल्लो समयमा हाम्रो समाज विविध कारणले गर्दा केही पछाडि परेको हुनाले हामीले आफ्नोपन भन्दा पनि बाह्यपनलाई बढी अंगीकार गरेको अवस्था हो । हामी टेक्नोलोजीले विगार्छ भन्छौं पनि तर त्यही टेक्नोलोजी नभई जीवन चल्दैन पनि भन्छौं । त्यसले गर्दा अहिलेको न्यु जेनेरेशनमा शैक्षिक यात्राहरु, गतिविधिहरुमा हामी नेशनल, इन्टरनेशनल लेभलमा अलि पछाडि परेको अवस्था पनि छ । तसर्थ हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेको के हो भने एकेडेमी डेभलपमेन्टसँगसँगै उसको ओभरल डेभलपमेन्टका लागि अलिकति व्यालेन्स स्कूलिङको कन्सेप्टमा छौं । व्यालेन्स स्कूलिङ के हो भने सैद्धान्तिकरुपमा पढाउने जुन चलन छ त्यसलाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकको बीचमा अलिकति व्यालेन्स गर्न अवको शिक्षामा आवश्यक छ । हामीले अहिले ९–१२ मा गर्न खोजिएको कुरा भनेको पुरानो शिक्षा प्रणाली र अहिलेको आईटी बेसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने सोच हो । अर्को अहिले टड्कारो रुपमा खड्किएको कुरा के हो भने हामी अलि एकेडेमीक कुरालाई त जोड दियौं, विद्यार्थीहरु शैक्षिक हिसाबले अगाडि पनि भयो तर उसको व्यक्तिगत मूल्य मान्यता, आफ्नो इज्जत गर्ने, आफ्नो पहिचान पत्ता लगाउन सक्दैन भने पछि गएर समाजलाई केही कुरा पनि दिन सक्दैन । त्यसैले शैक्षिक क्षमता सँगसँगै हाम्रो मूल्य मान्यता र आफैलाई पनि माया गर्ने वातावरण हुनुप¥यो । त्यो कुरा हाम्रो तर्फबाट भन्नेभन्दा पनि स्वयं व्यक्तिले महसुस गर्न आवश्यक छ । त्यसैले हामीले पुराना कुरालाई सँगसँगै नयाँ कुराहरुलाई पनि समेटेर लैजानु आवश्यक छ । यसर्थ अब बनेपा निष्ट अलिकति व्यालेन्सिङ स्कूलको कन्सेप्टबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।
# व्यालेन्सिङ स्कूलका लागि निर्धारित समयले पुग्छ ?
व्यालेन्सिङ स्कूलका लागि छुट्टै कक्षा चाहिन्छ भन्ने होइन । हामीले त्यसभित्र रहेको करिकुलममा रहेको एक्टिभिटिजलाई मध्येनजर गरेर गर्ने हो । यसको लागि वर्कआउट समेत गरेका छौं । हामीले मूल्यांकन गर्ने विधिहरुलाई अलि परिवर्तन गर्ने मात्र हो । करिकुलमले के कुरा भन्छ त्यो मात्रै गराउँछौं । अर्काे कुरा हामीले अवरनेश पनि गराउने गरेका छौं । हामीले भनेका कुराहरुलाई छुट्टै समय चाहिँन्छ भन्ने छैन । साधारणतया हाम्रा कक्षाहरु १०ः३० देखि ५ बजेसम्म हुन्छन् ।
# विद्यार्थीहरुले ९ कक्षा देखि नै विज्ञान संकाय अध्ययन गर्छु भन्ने कुराको कसरी छनौट गर्न सक्छ ?
हाम्रो यहाँ बुझाई अलि नमिलेको छ । विज्ञान भनेको सबै विषय हो । यसको अर्थ हामीले ९ कक्षामा विज्ञान मात्र पढाउँछौं सोसल पढाउन्नौं भन्न खोजको होइन । हामीले विद्यार्थीलाई जस्तो वातावरण दिन्छौ जस्तो हामीले उनीहरुप्रतिको सोच विकास गर्छाै विद्यार्थी त्यस्तै बन्दै जाने हो । मैले भन्न खोजेको विद्यार्थी पत्रकारितामा लाग्नुहुन्न, लिटरेचरमा लाग्नुहुन्न त्यो होइन । हाम्रो मान्यता भनेको कम्तीमा पनि उच्च शिक्षा कुनै विषयमा अध्ययन गरे पनि कम्तीमा स्कूलको शिक्षा साइन्समा भयो भने त्यो विद्यार्थीमा पछि भविष्यमा देखिने आउटपुट धेरै राम्रो हुन्छ । अहिले सामान्य जिवन निर्वाह गर्न पनि साइन्स र टेक्नोलोजी आवश्यक भैसकेको छ । नितान्त अरु विषयलाई इग्नोर गर्न खोजिएको भने होइन । हामीले कोर भ्यालु जुन हुन्छ समाजलाई चाहिने शिक्षा प्रदान गर्नेछौं । जुन शिक्षा अबको १० वर्ष पछिका लागि हो । विद्यार्थीहरुमा भएको मार्कसिट उच्च भएर मात्र हुँदैन । त्यो अनुसारको क्षमता, आत्मविश्वास, र आफूले आफूलाई माया गर्ने जबसम्म हामीले विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्दैनौ भने पक्कै पनि हाम्रो देशले आमूल परिवर्तन गर्नु कठिनै हुन्छ । तसर्थ हामीले सबै कुरालाई साइन्सबाट डिफाइन गर्न खोजेका छौं । अर्काेकुरा १२ सम्म साइन्स पढेर आउनुभयो भने संसारमा जे जति विषयहरु छन् आउनेवाला विषयहरु छन् भने पनि त्यसमा तपाईको इच्छाअनुसारको विषयहरु पढ्न पाइन्छ । साइन्सलाई इग्नोर गरेर अरु विषयहरु तिर लाग्नुभयो भने अरु विषयहरु संकुचित हुन सक्छन् । तसर्थ साइन्स आजको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता हाम्रो मात्र होइन अमेरिकाको पनि हो ।
# कक्षा ९ मा शुल्क के कति छन् ?
सेवा सुविधा अनुसार शुल्क धेरै छैन । बनेपा निष्ट काभ्रेमा कमै शुल्क लिनेमा पर्छ । अर्काे कुरा हामी सुविधा लिन्छौं भने शुल्क पनि तिर्नुपर्ने पनि हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हामीले शुल्कको बारेमा पनि सोचेका हुन्छौं । शुल्क कम गर्ने हाम्रो पनि चाहना हो । तैपनि बनेपा निष्ट महँगो पनि होइन । साधारणतया २–४ हजार प्रयोगात्मक हिसाबले पनि बढ्न पुगेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शुल्कभन्दा माथि छैन ।
# नयाँ शैक्षिक नीति र स्थानीय तह पुनर्संरचनाले केही असर गर्छ ?
नीति नियम पनि हाम्रै लागि बनाउने हो । बनेपा निष्टको आफ्नै अधिकार पनि छैन । राज्यले भोलिका दिनमा १२ सम्म निःशुल्क पढाउनुपर्छ, प्राइभेटहरु चलाउन हुन्न भनेमा हामी खुशी नै छौं । हामी पनि यही समाजका हौं । हाम्रा छोराछोरी पनि पढाई नै रहेका छौं । नीति नियमले असर गर्ने होइन, नीति नियम जे आउँछ त्यसलाई सहयोग गर्न तयार छौं । किनकी हामी पनि यो देशमा केही न केही योगदान गरौं भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका हौं । त्यसकारण आउने नीति नियम अनुसार संस्था चल्ने हो । राज्यको अनुमति र निर्देशन पालन गरेर हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त प्राइभेटले बनाउने हो । प्राइभेट भनेको छुट्टै निकाय र सरकार भने होइन । कतिपय कुराहरु क्विक डिसिजन गर्छाैं । भोलिका दिनमा नियम परिवर्तन जे हुन्छ त्यो स्वीकार्य छ । हामी उच्च शिक्षामा पनि जान्छौं । केही राम्रा विषयहरु पनि ल्याउने योजनामा छौं । समाजलाई आवश्यकता भएको र अहिले यहाँ नभएको विषयहरुमा काम गरौं भन्ने मान्यता पनि हो । त्यसअनुसार हामी लागिरहेका पनि छौं ।
अन्तमा अभिभावकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने बनेपा निष्टमा आउनुस्, बुझ्नुस् । हाम्रो हामीले गरेको यो सानो प्रयासलाई हजुरहरुको साथ भयो भने भोलिका दिनमा यो समाजलाई केही योगदान हुनेछ । कम्तीमा पनि हाम्रा नानीबाबुहरुको भविष्य अलि फरक बन्नेछ भन्ने आशा छ ।
प्रकाशित मिति: 06 April, 2017